Halkan ka daawo taariikhda kelidii taliyihii Yaman ee isaga oo askari ah la wareegay xukunkii dalka iyo halka uu maanta ku danbeeyey oo aakhiro ah. ( Nala daawo ) | Awdalpress.com
Halkan ka daawo taariikhda kelidii taliyihii Yaman ee isaga oo askari ah la wareegay xukunkii dalka iyo halka uu maanta ku danbeeyey oo aakhiro ah. ( Nala daawo )
Waxa Daabacay staff-reporter on Dec 4th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Wararka ka imaanaya dalka Yaman ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalax lagu dilay dagaal uu Xuutiyiinta kula galay magaalada Sanca.
Sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada waxay muujinayaan maydka qof u eg saalax oo dhaawacyo xun ay ka gaareen madaxa.
Cali Cabdalla Saalax iyo Xuutiyiinta oo dagaallamaya
Xulafada Sacuudiga oo soo dhoweeyey Cali Cabdalla Saalax oo dagaal kula jira Xuutiyiinta
Xalay, magaalada Sanca waxaa ruxay duqeynta ay geysanayaan dowladaha uu hor kacayo Sacuudiga, waxaana lala eegtay Xuutiyiinta. Sidoo kale dagaal dhulka ah ayaa la isu adeegsaday hub culus. Hay’adaha gargaarka waxay sheegeen in shacab badan ay ku go’doomeen meesha uu dagaalka culus ka socday.
Xuutiyiinta ayaa la wareegay guriga SaalaxLahaanshaha sawirkaAFP
Maanta salaaddii duhur ka dib, guriga Cali Cabdalla Saalax ayaa la qarxiyay. Weli ma cadda in Saalax uu ku jiray guriga, balse saacado ka dib qaraxa, waxaa soo baxay wararka sheegaya in uu dhintay.
Muuqaal aan la xaqiijin oo baraha bulshada lagu baahiyay wuxuu muujinayaa mayd la sheegay in uu Saalax yahay oo lagu waday busta gaduudan. Waxaa siday rag hubeysan oo ku qeylinayay “Allahu akbar” iyo “Cali Cafashi-yoow!” – taas oo ay ula jeedaan qabiilka uu ka soo jeedo.
Xakim Almasmari, oo ah tafatiraha wargeyska Yaman Post ayaa TV-ga Al Jazeera u sheegay in dableyda Xuutiyiinta ay rasaas ku fureen kolonyada Saalax oo maraysay bar-koontorool oo ku taalla Koonfurta Sanca. Wuxuu ku sii socday deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanhan.
Tobannaan kun oo reer Yemen ah oo dalbaday in dagaalka la soo afjaro
Cali Cabdalla Saalax wuxuu madaxweyne ka noqday Waqooyiga Yaman, 1978-dii. Markii Yaman ay midowday 1990-kii, wuxuun madaxweyne u noqday jamhuuriyaddii cusbeyd.
Xuutiyiinta oo doonayay in ay go’aan Shiicada Zaidi ee laga badan yahay, ayaa Saalax la dagaallamay, laga soo billaabo 2004 illaa 2010-kii.
Waxay sidoo kale taageereen kacdoonkii 2011, xilka looga tuuray Cali Cabdalla Saalax, wuxuuna xilka ku wareejiyay ku xigeenkiisii, Cabdurabah Mansuur Haadi.
Xiisadda u dhexeysay Xuutiyiinta iyo Saalax ayaa sare u kacday ka dib isu soo bax ka dhacay SancaLahaanshaha
Xiisadda u dhexeysay Xuutiyiinta iyo Saalax ayaa sare u kacday ka dib isu soo bax ka dhacay Sanca
Source BB iyo AlJazera.
This post has been viewed 11106 times.